Ikhaya > Imikhiqizo > Amapipipi Weplastiki
(Yonke imikhiqizo engu-2 ye-Amapipipi Weplastiki)
I-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. ingenye yezinto ezine-Amapipipi Weplastiki ezihola phambili e-China. Yimboni & umphakeli onguchwepheshe wokwenza Amapipipi Weplastiki. Nikeza ikhwalithi ephezulu Amapipipi Weplastiki ngentengo ephansi eshibhile.
I-Model No.: CL-MT0004
Tag: Umsizi wePlastiki weLab , Ukuxhaswa Kwe-Plastic Large Plastic , Ukuxhaswa Okuphezulu Kweplastiki YePlastiki
Igama lomkhiqizo: CL-MT0004 Into: Ukusekela kwePlastiki Imininingwane: Funnel yePlastiki, CL-MT0004 Inzuzo Yenkampani Yethu 1. Imikhiqizo yezokwelapha ezisebenzayo zenza iminyaka engaphezu kwengu-10 2. Ikhwalithi ephakeme ngenani lokuncintisana 3....
Tag: I-Toppette ye-Medical Toppette yamapipettes amaningi , I-Micropette ye-Hospital Microchannel Pipettes , I-Micropette Plus Multiplication Pipettes
Igama lomkhiqizo: Ama-Pipettes amaningi Into: CL-PP0003 Imininingwane: Pipettes yama-Multichannel, CL-PP0003 Inzuzo Yenkampani Yethu 1. Imikhiqizo yezokwelapha ezisebenzayo zenza iminyaka engaphezu kwengu-10 2. Ikhwalithi ephakeme ngenani...
Amapipipi Weplastiki ukuthengiswa okuvela ku-China, Ukuthengiswa Okuqondile kusuka kubakhiqizi beChina abaholayo emanani entengo eshibhile. Thola imikhiqizo engu-Amapipipi Weplastiki eningi ku-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. futhi uthole izinga eliphakeme le-Amapipipi Weplastiki ngokuqondile kusuka ku-Amapipipi Weplastiki abathengisa abathengi nabathengisi abathembekile. Thumela izidingo zakho zokuthenga & Thola impendulo ngokushesha.